Ururka OLNF oo ka hadlay Ansixinta Ra’isalwasaaraha Cusub ee Itoobiya – Radio Daljir
Abriil 4, 2018 8:11 b 0
War-saxaafadeed uu soo saaray ururka ONLF ayaa lagaga hadlay mgaacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Ethiopia, Abiy Ahmed.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka Soomaalida ah iyo Ethiopia-da kaleba ay ka shaki qabaan talaabada siyaasadeed ee ururka EPRDF uu ku keeni karo isbeddel micno leh, sababta oo ah, baa warsaxaafadeedka lagu yiri, taariikhda taban ee xisbigan oo ku sifoobay khayaamo, inuu muquuniyo dhamaan awoodaha kale ee siyaasadeed iyo inuu adeegsado gacan ka hadal, iyo xadgudubyo waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadamaha ah oo mucaaradka loo geysto.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan, ururka EPRDF uu si joogto ah u marin habaabiyey dadka iyo bulshada caalamkaba si uu indhaha dadka uga jeediyo xadgudubyada waaweyn, maamulka aan dimoqraadiga ahayn ee uu ku hayo, gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee Ogaden ku nool, ayaa war saxaafadeedka lagu yiri.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in dadka Soomaalida ah muddo qarni ah la xagal daaciyey, si xunna loo dhibaateeyey, iyada oo xisbiga EPRDF-na uu uga sii daray, oo uu dhaafiyey dhamaan talisyadii ka horeeyey, isla markaana uu burburiyey karaamadii iyo noloshii dadka Soomaalida, sida war saxaafadeedka lagu sheegay.
War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool Ogaden ay Abiy Ahmed ku xukmin doonaan falalkiisa ee aanay ku xukmin doonin hadaladiisa la qurxiyey.